Sajhasabal.com | Homeकोरोना संक्रमित एक जना साउदी उडे, एक जना भैरहवा उडे
अनिल अधिकारी | असोज-३०, काठमाडौँ | भैरहवाबाट असोज २७ गते वैदेशिक रोजगारीको लागि साउदी जान काठमाडौँ आएका धनुषाका एकै गाउँका तीनजना युवाहरु काठमाडौँमा एक होटलमा संगै खाए, संगै बसे । बिदामा साउदी जाने तयारी सहित आएका उनीहरुले सलाम एयरको टिकट लिएका थिए । उक्त उडानमा साउदी जान कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने थियो ।
पहिलो व्यक्ति - नेगेटिभ
दोश्रो व्यक्ति - नेगेटिभ
तेश्रो व्यक्ति - पोजेटिभ
दोश्रो व्यक्ति - पोजेटिभ
तेश्रो व्यक्ति - नेगेटिभ
सूर्य हेल्थ केयरले नेगेटिभ रिपोर्ट दिएको दुई जना साथिहरु साउदी उडेपछी पोजेटिभ भएका व्यक्ति घर फर्किने सोच बनाई काठमाडौँको विमानस्थलबाट शुक्रबारनै भैरहवाका लागि उडेका छन् । उनले भने 'मलाई कोरोनाको कुनै लक्षण छैन, म अहिले भैरहवाको लागि उडान गर्न बोर्डीङ पास लिदैछु ।' उनले अगाडी भने 'मेरो हातमा दुई रिपोर्ट छन्, एउटाले पोजेटिभ देखाएको छ अर्कोले नेगेटिभ । दुई घण्टाको अन्तरमा स्वाव दिँदा आएको फरक-फरक रिपोर्टले अचम्म बनाएको छ । मैले आफ्नो समस्या कसलाई राख्नु ? मैले कुन रिपोर्टलाई विश्वास गर्नु ?' उनले भने 'कोरोना परीक्षण गर्दा एउटामा पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि साउदी जान पाइएन । घरबाट दशैं मानेर जानुहोला भनेपछि घर फर्कदैछु ।'
'हामीले हरेक रिपोर्ट सरकारी निकायमा पठाउछौं'- सूर्य हेल्थ केयर
सूर्य हेल्थ केयरका एक अधिकारीले भने 'फरक नतिजा आएपछि हामीलाई जानकारी गराएको भए हामीले त्यसलाई फेरी परीक्षण गर्न सक्थ्यौं तर त्यसबारे सूचना आएन ।' सूर्य हेल्थ केयरका अधिकारीका अनुसार परीक्षण गरिएको हरेक व्यक्तिको रिपोर्टबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको HOEC, स्वास्थ्य बिभाग टेकु, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समेत पठाइने गरिएको छ । कोरोना पोजेटिभ देखिएको व्यक्तिको रिपोर्ट अनुसार तत्काल संक्रमित व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायले सम्पर्क गरि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सूर्य हेल्थ केयरका अधिकारीले भने 'हामीले कोरोना पोजेटिभ देखिएको व्यक्तिको मोबाइल नम्बर सहितको जानकारी सरकारलाई पठाएका हुन्छौं । तर सरकारी निकायबाट फलोअप नहुने गुनाशो आएको छ ।' यसअघि पनि एक जना संक्रमितले ५ दिनसम्म सरकारले सम्पर्क नगरेको गुनाशो गरेको उनले बताए ।
जुनसुकै प्रयोगशालाको भएपनि पोजेटिभ रिपोर्ट देखिएका व्यक्तिको जानकारी स्वास्थ्य सेवा विभाग इपीडिमियोजोली तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई अनिवार्य दिनुपर्ने नियम छ । यो नियम अनुसार सरकारले पोजेटिभ भएका व्यक्तिको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कोरोना पोजेटिभ देखिएका व्यक्ति साउदी उड्दै गर्दा सरकारलाई पत्तो छैन । त्यस्तै अर्का कोरोना पोजेटिभ व्यक्ति उडानबाट धनुषा फर्कदैछन् । यसो हुनुमा सरकारी निकायबाट वेवास्ता भएको स्पष्ट देखिन्छ । कोरोना पोजेटिभ देखिएर विमानस्थल हुँदै धनुषा फर्किदै गरेका युवाले भने 'मलाई सरकारी निकायबाट कुनै फोन आएको छैन । काठमाडौँमा कहाँ बस्ने के गर्ने, कहाँ कसलाई गएर आफ्नो समस्या सुनाउने ? बरु सुरक्षित तरीकाले घर गएर घरमै होम आइसोलेसन् बस्छु ।' यो जवाफ दिदै गर्दा ति युवा काठमाडौँको विमानस्थलबाट भैरहवा जान वोर्डिङ पास लिदै थिए ।